Xog: Abiy Ahmed oo lagu wareejiyay xogta ciddii u maleegtay QARAXA.!! - Caasimada Online
Home Warar Xog: Abiy Ahmed oo lagu wareejiyay xogta ciddii u maleegtay QARAXA.!!
Xog: Abiy Ahmed oo lagu wareejiyay xogta ciddii u maleegtay QARAXA.!!
Addis-Ababa (Caasimada Online) – Ra’isul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ka badbaaay Qarax la doonaayay in lagu khaarijiyo xili uu khudbad u jeedinaayay kumanaan shacab Ethiopian ah.
Ra’isul wasaare Abiy Axmed oo saacado kadib Qaraxa magacaabay guddi baaritaan ayaa sheegay in dowladiisu ay aqbali doonto natiijada kasoo baxda baaritaanka.
Natiijo hordhac ah oo kasoo baxday baaritaan qaatay muddo laba cisho ayaa sheegaya in baaritaanka lagu ogaaday cida ka danbeysay Qaraxa lagu khaarijin lahaa Abiy Axmed.
Guddiga baaritaabka oo ka koobna ilaa 12 Khubaro ku xeeldheer arimahaasi ayaa Ra’isul wasaare Abiy Axmed u gudbiyay in Qaraxaasi aysan ku lug laheyn Kooxo argagixiso.
Guddiga ayaa warbixintooda ku sheegay in Qaraxa uu yahay mid looga soo horgeedo Siyaasada cusub oo ay qaadatay Ethiopia, taa oo lagu muujinaayo furfurnaanshi Siyaasadeed.
Guddigu waxa ay baaritaanka ku ogaaden in Qaraxa ay geysteen Xubno ka tirsan Mucaaradka Ethiopia kana soo jeeda Qowmiyada Tigree.
Guddigu waxa uu qoraalkiisa hordhaca ah intaa ku daray in Qaraxa loo hayo ilaa iyo afar xubnood oo ka tirsan garabka mucaaradka dowlada ee kasoo jeeda Qowmiyada Tigree.
Qowmiyada Tigree oo uu ka dhashay Milazanaawi ayaa aad uga soo horjeeda Siyaasada Ra’isul wasaare Abiy uu ku doonaayo in wadahadal lagula galo Dowlada Eriterea.
Tigree, waxa ay sidoo kale doonayaan in talada dalka laga saaro gacantooda waxa ayna rumeysan yihiin in Heshiiska lala galaayo Etiterea uu dhabar jab ku noqon karo Ethiopia, waana tan keentay inay qalqal amni galiyaan nolosha Ra’isul wasaare Abiy Axmed.
Sidoo kale, Kiiska Qaraxa oo u muuqda mid sii fogaaday ayaa waxaa iminka ka qeybqaadanaaya Khubaro ka socta FBI-da Mareykanka sababo la xiriira in Qowmiyada Tigree aysan baaritaanka Dowlada u fahmin mid lagu faquuqayo.
Dhinaca kale, Ra’isul wasaare Abiy Axmed ayaa iminka rumeysan in Qaraxa la doonaayay in lagu khaarijiyo aysan ku lug laheyn Ururo argagixiso balse uu yahay mid ay ku lug leeyiniin mucaaradka Tigree.